သတ္တုဓာတ် (နေမျိုး) | လမ်းအိုလေး
February 6, 2009 by lanolay	1 Comment
ကျွန်တော့်အိပ်မက်ဟာ အငွေ့ပျံပြီး ခရမ်းရောင်တိမ်တိုက်တစ်ခုဖြစ်သွား၊ အဲဒီတိမ်တိုက်ဟာ မျောလွင့်ကာ မြစ်တစ်စင်းပေါ်မှာ ဧရာမမိုးစက်ကြီးအဖြစ် ရွာသွန်းချ၊ မိုးစက်ကြီးဟာ မြစ်ထဲမှာ သတ္တုငါးတစ်ကောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွား၊ သတ္တုငါးဟာ မြစ်ထဲမှာကူးခတ်နေ၊ ကျွန်တော်က အဲဒီငါးကို သံလိုက်ဓာတ်လွှတ်ထားတဲ့ ငါးမျှားချိတ်နဲ့ ဖမ်းယူရရှိခဲ့၊ ရေခဲသေတ္တာအစုတ်ထဲထည့်ထားတဲ့ သတ္တုငါးဟာ ပျောက်ဆုံးသွား၊ ကြောင်တစ်ကောင်ကောင် ချီသွားပုံပဲ၊ တင့်ကားတစ်စီးက အမြောက်တစ်ချက် ပစ်လွှတ်လိုက်တော့ အဲဒီ့ငါး ဖျပ်ခနဲ ခုန်ထွက်လာ၊ ထွီ – အရိုးတွေချည်းပါလားတဲ့ ဖမ်းမိတဲ့လူတစ်ယောက်က ရေရွတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာလိုနေတာ သတ္တုဓာတ်မို့ ငါးကို ရှစ်ဒေါ်လာနဲ့ပြန်ပြီး ၀ယ်ယူခဲ့။ ငါးက ခုထိမသေသေးဘူး။ ကျွန်တော်က ငါးကို ဗိုက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ ၀က်အူနဲ့မူလီတွေ ထွက်လာ။ ခက်တာပဲ ကလီစာတွေကို ကြွပ်ကြွပ်ကြော်ပြီး ၀ါးစားပစ်လိုက်တယ်။ ၀မ်းဗိုက်ကို ပြန်ချုပ်ပြီး အဲဒီငါးကို အရည်ကျိုလိုက်ရော။ ပြီးတော့ခရမ်းရောင်ဓာတ်ပြားတစ်ချပ် သွန်းလိုက်တယ်။ အဲဒီဓာတ်ပြားကို ဖွင့်နားထောင်လိုက်တော့ အမြောက်သံတစ်ချက် ကြားရတယ်။ ငါးက ခုထိမသေသေးဘူးဗျ။ ပင်လယ်ကို မူလီစုပ်ထားမှဖြစ်မယ်။
(ကြယ်များနဲ့အတူ – မောင်ဆေးရိုး၊ နေမျိုး၊ ကိုထက် (ရေဦး)၊ ထွန်းလွင်သွယ် (ဆူးဖြူရိပ်)၊ ဇော်ထိန်၊ နေညိုအောင်။ လင်းသစ်ရောင်စဉ် – ၂၀၀၈)
Categories: Kabyarz | Tags: Along with the stars, နေမျိုး, ကြယ်များနဲ့အတူ, Kabyarz, lanolay | Permalink.
One thought on “သတ္တုဓာတ် (နေမျိုး)”
cool! i can see how you created but i don’t know how you decorated! IT IS ART!